FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SILKY TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Silky Terrier
Phoebe the Silky Terrier amin'ny 2 taona
Lisitry ny Silky Terrier Mix Dogs
Anaran-kazo Silky Terrier hafa
Terre Silky Aostralianina
Ny Silky Terrier, antsoina koa hoe Sydney Terrier, dia alika kely sy tsara volo ary ambany toerana. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana, miaraka amin'ny topline ambaratonga. Ny loha miendrika wedge dia fisaka eo anelanelan'ny sofina, somary lava ny halavany, ary lava kokoa ny karandohany noho ny volomaso. Malalaka ny fijanonana ary mainty ny orona. Mihaona amin'ny manaikitra hety ny nify. Ireo maso kely miendrika amandy dia miloko mainty misy molony maso. Ny sofina mijoro, miendrika V dia kely ary apetaka ambony loha. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy miaraka amin'ny tongotra kely sy saka. Ny rambo avo lenta dia voadona mahazatra. Naoty: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Esorina indraindray ny demclaws. Ny palitao lava sy manja ary tokana dia 5-6 sm (12-15 cm) ny halavany ary tonga amin'ny aloky ny manga misy marika mena na mena izy. Ny volo dia mizara roa afovoan'ny lamosina. Izy io dia manana topknot izay tokony ho maivana kokoa noho ny loko mena na mena. Silky Terriers dia teraka mainty. Ny palitao dia tena mora ketrona sy tsihy raha tsy voatafy matetika.
Ity terery kely be fitiavana ity dia tena marani-tsaina, be herim-po ary mailaka. Tiavo, be vava, falifaly ary tia fiaraha-monina, tiany ho akaiky ny tompony. Feno herin-tsaina izy io ary mila fanatanjahan-tena betsaka mba ho tony. Liana sy liana izy, mpihady hafanam-po. Mavitrika, marani-tsaina ary mailaka. Na eo aza ny habeny, ity alika miketrika ity dia manao mpiambina tsara. Ity dia karazana matanjaka izay manitsy tsara ny dia. Tsy atokisana amin'ny hafa izy io amin'ny ankapobeny biby fiompy tsy kaninina toy ny bitro , hamsters SY kisoa ginea . hifanerasera tsara, anisan'izany ny saka, ka tsy manenjika azy ireo izany. Tsara amin'ny ankizy raha mbola tsy manana tompony malemy paika ny alika izay tsy manome azy ny fifehezana sy ny rafitra ilain'ny alika voajanahary rehetra. Training tena mahitsy ireto alika ireto satria dodona fatratra ny hianatra. Aza avela hivoatra ity alika kely ity Syndrome kely alika , OLONA nampirisika fihetsika toerana inoan'ny alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Rehefa mino i Silky fa izy no sefo, dia miova ny toetrany, satria manandrana mifehy ny olona sy ny manodidina azy rehetra izy. Mety ho lasa mitaky be loatra, fanahy iniana, miaro azy io ary mety manomboka mibontsina be. Mety manomboka tsy mendri-pitokisana amin'ny ankizy sy indraindray ny olon-dehibe, manjary snappish raha avela ka mety hifamely amin'ny alika hafa.
Hahavony: 9 - 10 santimetatra (23 - 25 cm)
Ny vehivavy amin'ny ankapobeny dia kely kokoa noho ny lahy.
Lanja: 8 - 11 pounds (4 - 5 kg)
Salama amin'ny ankapobeny. Ny olana kely dia ny aretin'ny intervertebral disc, dysplasia amin'ny kiho, ny fanambanin'ny patellar ary ny Legg-Perthes. Indraindray ity karazana ity dia voan'ny diabeta, androbe ary fianjerana amin'ny tracheal.
shih tzu sy spaniel akoho
Ny Silky Terrier dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Ireo alika ireo dia mihetsika be ao anaty trano ary tsy maninona raha tsy misy tokontany raha ampiasaina tsara.
Ny Silky Terrier dia feno angovo ary mila mandeha isan'andro mandeha . Manana tanjaka mahatalanjona izy ary hankafy ny vintana mihazakazaka sy milalao.
Alika kely eo amin'ny 3-6 eo ho eo
Ny Silky Terrier dia tena mora tohina sy tsihy ary mila mikorisa sy miborosy isan'andro. Tokony hosasana tsy tapaka izy io mba hitazomana ny volo ho tsara toetra. Mila fanoloran-tena tena lehibe avy amin'ny tompony, mitaky 15 minitra isan'andro. Aorian'ny fandroana dia alao antoka fa maina sy mafana tanteraka ilay alika. Ny palitao dia tsy maintsy haingo tsindraindray, ary ny volo amin'ny tongony manomboka amin'ny lohalika ka hatrany ambany dia voaravaka fohy. Ny volo latsaka amin'ny maso dia fehezina amin'ny fehin-kibo mba hahafahan'ny alika mahita mora kokoa. Ny Silky Terrier dia mandatsaka kely tsy misy volo ary matetika alika tsara ho an'ireo miaraka aminy allergie na tsy fahazakana .
Ny Silky Terrier dia noforonina tamin'ny faran'ny taona 1800 tamin'ny fiampitana ny Yorkshire Terrier miaraka amin'ny Terrier aostralianina . Ny tanjona dia ny fanatsarana ny loko palitao an'ny Terriers Australiana miloko manga sy mena. Ny tertera aostralianina sy ny silky terrier dia karazany iray ihany nandritra ny taona maro mandra-pahafantatra azy ireo ho karazany roa samy hafa ary nisaraka tamin'ny karazany roa. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nitondra ny sasany tamin'ireo Silky Terriers nody tany aminy ny miaramila amerikana. Ny karazana dia neken'ny AKC tamin'ny 1959 ary ny fenitra napetraka tamin'ny 1962 ary taty aoriana nohavaozina tamin'ny 1967. Ny Silky Terrier dia alika mpiara-miasa foana, fa ity alika kely haingam-pandeha ity dia tena mahay misambotra biby mpikiky.
mpiandry alemana vs bulldog amerikana
Ity Silky kely malala ity dia antsoina hoe Ch. Amron's Cat Bearlou (LuLu), tompona / mpiompy / mpikarakara: Norma Baugh, Amron Silky Terriers
'Ity i Louie, Silky Terrier amin'ny 2 1/2 taona. Navotana i Louie tamin'ny volana feb. 2009. Natolotry ny tompony teo aloha izy satria 'lehibe loatra'. Milanja 11 lbs i Louie. (mandehana sary). Mahafinaritra ny toetrany - izay rehetra antenainao hisy Silky tanora, salama, marani-tsaina, mpankato ary be fikorontanana. Izahay mivady dia samy mpankafy an'i Cesar Millan, ary mijery tsy tapaka ny seho ataony. Namaky betsaka tamin'ny mombamomba azy napetraka tao amin'ny Internet ihany koa aho. Nalaiko ity sary ity nandritra ny fotoana filalaovana. Toa tsy dia manam-potoana ampy any ivelany i Louie. Ny fampahalalana momba ny fiofanana nianarako tamin'i Cesar dia nanampy be dia be. Tompon'ny rahavavin'i Yorkie izahay nandritra ny 18 taona, ary nitondra azy ireo toy ny zaza. Tsy hevitra tsara. Rehefa noraisinay i Louie dia nanomboka nanaraka ny torohevitra nomen'i Cesar “Pack Leader” aho. Inona no maha samy hafa. Tsy alika tsara fotsiny izy fa nameno ny lavaka be tao am-pontsika navelan'ny Yorkies very. '
'Ity i Bella. 1 taona sy 5 volana izy amin'ity sary ity. Tia sy hendry izy ... nefa tena maditra! Silky Terrier izy ary mieritreritra fa alika be .... tiako izy! '
'Fampahafantarana an-dRamatoa Phoebe, Silky 2 taona monina any Selangor, Malaysia. Phoebe dia miaina amina saka 2, persana amerikana tsy dia mifangaro, persona volamena ary saka saka any an-toerana, Sirius Black. Tian'i Phoebe ny milalao saka ary miara-matory amin'izy ireo. Phoebe sy ny saka dia tena tian'ny tompony, izay manohy ny fianarany any Pet Grooming ankehitriny. '
Duke io ary hoy izy: 'Andriamanitra hitahy an'i Amerika.'
alika newfoundland mifangaro poodle
Cookies Lee alika kely 3 volana milanja 1,5 kilao (1,5 kg).
Miaraha miasa amin'i Silky Terrier 4 taona
Ozzie ilay Silky Terrier 4 taona
Hijery ohatra misimisy momba ny Silky Terrier
Silky Terrier Sary 1
Alika Silky Terrier: sary an-tsokosoko voaangona
Aostraliana omby alika omby terrier Mix
dachshund sy min Pin Mix
Alika mpiady ady totohondry 2 taona
Staffordshire terrier sy laboratoara